Africa Inoti Zimbabwe Ngaitengese Mangoda Ayo Isingaongororwe
Zimbabwe, South Africa nedzimwe nyika dzemu Africa dziri mumusangano we Kimberley Process, kana kiti KP, dzakaramba kupinda musangano we Working Group on Monitoring kuDubai svondo rapera uko nyika idzi dzakabvumirana kuti Zimbabwe ipihwe mvumo yekutengesa mangoda ayo.
Hurukuro idzi dzakaitika mushure mekunge sachigaro weKP, Va Mathieu Yamba, vakapa Zimbabwe mvumo yekutengesa mangoda ayo isingaongororwe.
Musangano uyu wakabuda nechibvumirano chitsva, icho chinofanirwa kutambirwa neZimbabwe. Zvimwe zvinhu zvaiva muchibvumirano chekare sekuongorora nyaya dzemhirizhonga, zvakabviswa, zvinova zviri kutsamwisa masangano akazvimirira ega.
Asi gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vaudza Studio7 kuti vakaramba kupinda mumusangano uyu webazi reKP nekuti bazi iri rava kuita sekunge ndiro KP uye richitungamirirwa nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango.
Mukuru we Centre for Research and Development, Va Farai Maguwu, avo vakanga vari kuDubai kumusangano uyu, vanoti Zimbabwe yava kutarisirwa kuti ichabvuma here chibvumirano chakabuda mumusangano wayakaramba kupinda.